भारतका पुर्वराजदुतको दा’वी- नेपालमा कांग्रेसको सरकार भएको भए चीनलाई स्वागत गर्ने थिएन (भिडियो) « Swadesh Nepal
भारतका पुर्वराजदुतको दा’वी- नेपालमा कांग्रेसको सरकार भएको भए चीनलाई स्वागत गर्ने थिएन (भिडियो)
२०७२ असोजमा नेपालमा संविधान जारी हुँदा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहेका र’णजित रायसँग भारतीय लेखक तथा जवाहरलाल नेहरु युनिभर्सिटिका प्राध्यापक हेप्पिमन जेकवले भारतीय अनलाइन द वायरका लागि भिडियो अन्तर्वार्ता लिएका छन्। त्यसको अनुवादित तथा सम्पादित् अंशः
तपाईंको अर्थ तराईमा हुने अशान्तिले भारतमा प्रभाव पर्छ र अर्को भारतले इतिहासदेखि नै मध्यस्थता गर्दै आएको र सुझाव दिने गरेको पृष्ठभूमिमै त्यो प्रयास गरेको हो भन्ने हो ?
चीनसँग कसरी ‘डिल’ गर्ने भन्ने फरक विषय हो। नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ। नेपालमा चिनियाँ भूमिकाको विषय फरक कुरा हो। त्यसका लागि फरक प्रकारको नीति आवश्यक छ। चीनले सबैतिर भूमिका खेलिरहेको छ। त्यसलाई भारतले कसरी हेर्ने? खतराको रुपमा हेर्ने कि हामीले यसलाई हार्ने र जित्ने खेलको रुपमा मात्र लिने? कि नेपालमा चीन बलियो हुनासाथ भारत बाहिरिन्छ भन्ने? यो जिरो सम गेम भयो। अर्को कुरा दुवै मिलेर काम गर्ने। सायद केहि मिश्रित रुप हुनसक्छ। स्पष्टरुपमा, भारतले नेपालमा सक्रिय कदम बढाउनै पर्छ। नेपालमा भारतीय परियोजनाहरुको कार्यान्वयन निकै कमजोर रहेको छ। हाम्रो कनेक्टिभिटी परियोजनाहरु, जलविद्युत परियोजनामा सहकार्य गर्नुपर्छ। दुवै देशको आर्थिक सम्बन्धलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। हामीले नेपालमा अन्य पक्षहरुसँग थप सहकार्य गर्नुपर्छ। विगतमा हामीले त्यो गर्न चाहेका थिएनौं। जस्तै अमेरिका, बेलायत, युरोपेली संघसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। हामीले संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा यो शुरु गरेका पनि थियौं। हामीले चीनसँग पनि अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी हेरिरहेका छौ भनेर विचार आदानप्रदान गरेका थियौं।
अहिलेको चिनियाँ उपस्थितिलाई हेर्दा हामीसँग धेरै पैसा छैन भने के गर्ने त? त्यस्तो अवस्थामा के विकल्प बाँकी रहन्छ? मैले केही मिलनबिन्दु देखेको छु। त्यसलाई अघि बढाउनु पनि पर्छ। हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको यस क्षेत्रका देशलाई दुवै देशको अर्थतन्त्रसँग जोड्ने हो भने भारतको आर्थिक वृद्धि र समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ। उनीहरुले पनि भारतीय अर्थतन्त्रले प्राप्त गरेको सफलताबाट देखिने गरी लाभ लिनसक्ने हुनुपर्छ। त्यसैले ती देशको अर्थतन्त्रसँग लिंक बनाउनु पर्छ। यो कनेक्टिभिटिबाट हुनसक्छ। त्योभन्दा बढी संयुक्त परियोजनाबाट हुन्छ। नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउने र भारतमा निर्यात गर्ने हो भने त्यसले धेरै सम्पर्कको काम गर्छ।
हामीले कसले जलविद्युत आयोजना बनायो भनेर किन धेरै चिन्ता लिने? यदि चीन नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउन चाहन्छ र त्यहाँ उत्पादन भएको विजुली भारतमा बेच्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई एकीकृत गर्ने हाम्रो रणनीतिक उद्देश्य पुरा हुन्छ। त्यसो भए हामीले साँधुरो सोचाइ किन राख्ने? भारतमा पनि चीनका धेरै कम्पनीहरुले लगानी गरेका छन् भने इन्डोचाइना कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्छन् भने त्यसमा के खराबी हुन्छ र? त्यो कम्पनीले पहिलेदेखि नै भारतमा लगानी गरिरहेकै छ भने हाम्रो लागि सुरक्षा चुनौति हुन्छ? हामीले अवसरलाई पनि पहिचान गर्नुपर्छ। हामीले परम्परागत सोचाइ परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। चिनियाँ आक्रमतामाथि हावी हुन सक्ने भए ठिक छ, होइन भने सहकार्यको लागि सहभागी हुनुपर्ने समय आयो। चीनको वुहान सम्मेलनमा चीन र भारत प्लस वानको धारणा आएको छ। अफगान कुटनीतिज्ञहरुलाई पनि भारत र चीनले संयुक्त रुपमा तालिम दिएका छौं। यो अवधारणालाई थप विस्तार गरेर जानुपर्छ। हाम्रो सामारिक स्वार्थसँग मिल्छ भने। -नेपालखबरबाट साभार